Dorian an-dàlana ho an'ny Grand Bahama, Abacos: malemy kely ho an'i Florida
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Dorian an-dàlana ho an'ny Grand Bahama, Abacos: malemy kely ho an'i Florida
Na dia tsy misy atahorana aza ny ankamaroan'ny Karaiba, dia mailo hatrany ny Bahamas sy ny fanjakan'i Etazonia Florida. Ny rivodoza Dorian dia mijanona ho tafio-drivotra sokajy 4 manimba. Ny National Hurricane Center dia namoaka fanombanana ny asabotsy maraina teo amin'ny Hurricane Dorian. amin'ny 5 maraina EST amin'ny lalana mankany Bahamas sy Florida.
Ny ankamaroan'ny mpizahatany dia nafindra toerana niala tamin'ireo nosy Bahamas voadona.
Ny tatitra dia milaza fa manohy mahavariana i Dorian amin'ny sary zanabolana androany maraina, miaraka amin'ny velaran'ny rahona mangatsiaka somary simetrika manodidina ny 10-15 n mi ny masony. Tsy mbola nisy ny angon-drakitra momba ny fiaramanidina vaovao taorian'ny tafio-drivotra farany. Na izany aza, niova kely ny fisehoan'ny zanabolana hatramin'ny nahatafavotan'ny tafio-drivotra farany, ary ny tombana ny tanjaky ny zanabolana isan-karazany sy kendrena dia niova kely tao anatin'ny ora maromaro lasa izay. Miorina amin'izany, ny tanjaka voalohany dia mijanona 120 kt.
Ny hetsika voalohany dia 290/10 izao. Ny tendrony ambany-midina tropikaly any avaratry ny rivo-doza dia tokony hitarika azy miankandrefana-avaratra andrefana mandritry ny 48 ora manaraka, miaraka amin'ny hafainganam-pandeha lasa miadana rehefa mandalo eo akaikin'ny Abacos ny foibe ary Grand Bahama. Miorina mafy ny torolàlana ho an'ity ampahan'ny làlana ity, ary eo akaikin'ny ECMWF, UKMET, ary ny HCCA no nanitsy ireo maodely marimaritra iraisana. Ny vinavinan'ny làlana dia nanjary olana kokoa taorian'ny 48 ora. Ireo maodely eran-tany izay ampiasain'ny NHC matetika, miaraka amin'ny maodely HWRF sy HMON, dia nanao fiovana iray hafa nankany atsinanana ka tsy nisy na iza na iza tamin'izy ireo nanombana an'i Dorian hidina tany Florida. Na izany aza, ny
Midika ny ensemble UKMET fa mbola mitondra ny tafio-drivotra manerana ny saikinosy Florida, toy ny mpikamban'ny GFS sy ECMWF maromaro. Ny vinavinan-dàlana vaovao ho an'ny 72-120 h dia hafindra miatsinanana hijanona atsinanan'ny morontsirak'i Florida, ary eo anelanelan'ny vinavina taloha sy ireo maodely marimaritra iraisana. Ny fanitsiana fanampiny amin'ny làlan'ny vinavina dia mety ilaina aorian'ny androany raha mitohy ny fironana maodely ankehitriny. Tsara homarihina fa ny làlan'ny vinavina vaovao dia tsy manakana an'i Dorian hidina amin'ny morontsirak'i Florida, satria ny ampahany betsaka amin'ny morontsiraka dia mijanona ao anaty lalan'ny tsy fahatokisana. Ary koa, misy fiatraikany lehibe mety hitranga na dia mijanona amoron-dranomasina aza ny afovoany.
Dorian dia tokony hijanona amin'ny tontolo tsara amin'ny ankapobeny mandritra ny 3-4 andro manaraka, ary ny torolàlana henjana dia manondro fa hijanona ho rivodoza mahery mandritra io fotoana io. Ny vinavinan'ny hery vaovao dia mitaky fanamafisana bebe kokoa anio, avy eo mampiseho fahalemena miadana izay manaraka ny fironan'ny torolàlana henjana. Mandritra io fotoana io, ny fiovana lehibe indrindra dia mety ho avy amin'ny tsingerin'ny fanoloana eyewall sarotra vinaina. Ny faramparan'ny vanim-potoana mialoha, ny fitomboan'ny fanetezana volo ary ny akaiky ny tany dia antenaina hampihena ny sasany.
Fotoana maharitra amin'ny tafiotra mahery vaika mampidi-doza sy ny tadion-drivotra mahery any amin'ny faritra avaratry ny avaratra andrefan'i Bahamas, indrindra ny Nosy Abaco sy ny Nosy Grand Bahama. Misy ny fampitandremana amin'ny rivodoza ho an'ireo faritra ireo, ary ny mponina dia tokony hihaino ny torohevitra nomen'ny tompon'andraikitra vonjy maika any an-toerana ary hamita ny fanomanana ny rivodoza anio.
Ny tafiotra mahery vaika ary ny rivodoza mahery vaika dia mbola azo atao ihany amin'ny ampahany amin'ny morontsiraka atsinanana amin'ny voalohan'ny volana afovoan'ny herinandro ho avy, fa satria i Dorian dia vinavinaina hihena ary hiodina avaratra akaikin'ny morontsiraka, izany koa tsy ho ela hamaritana hoe rahoviana na aiza no hisy ny fiakarana avo sy ny rivotra mahery. Tokony hipetraka eo amin'ny toerany ny drafitry ny rivodoza, hahafantatra raha ao amin'ny faritra famindrana rivo-doza izy ireo, ary henoy ny torohevitra nomen'ny tompon'andraikitra vonjy maika.
Ny loza ateraky ny rivotra mahery sy ny tafiotra mahery vaika mampidi-doza dia mitombo manaraka ny morontsirak'i Georgia sy South Carolina mandritra ny antsasaky ny herinandro ho avy. Ireo mponina any amin'ireny faritra ireny dia tokony hanohy hanara-maso ny fandrosoan'i Dorian.
Avy ny oram-be, mahavita tondra-drano mandrahona ain'olona, ​​amin'ny ampahany amin'ny faritra Bahamas sy ny morontsiraka atsimoatsinanan'i Etazonia amin'ity faran'ny herinandro ity hatramin'ny herinandro ho avy.
VOAFITSIM-PITSARANA SY WINDS MAX
Ny tsenan'ny tombo-kase mekanika dia vonona hitombo manerantany miaraka amin'ny fahasamihafana eo amin'ny fironana Phenomenal eo anelanelan'ny taona 2019 ka hatramin'ny 2028
Fomba fijerin'ny tsena otomotif automatique 2019 miaraka amin'ny fanadihadiana momba ny matihanina sy ny dinamika mifaninana hatramin'ny 2028